Iindaba - Ukukhanya kwangaphandle: Iindlela ezi-3 eziguqula icandelo
Izibane zangaphandle: iindlela ezi-3 eziguqula icandelo
Kule mihla, isixeko yeyona ndawo iphambili apho ubomi babantu buqhubeka khona. Ukuba sithathela ingqalelo ukuba uninzi lwabemi behlabathi bahlala kumaziko asezidolophini kwaye le meko inyuka kuphela, kubonakala kufanelekile ukuhlalutya indlela ezi ziguqulwe ngayo ezi ndawo kwaye yeyiphi imiceli mngeni ejongene nokukhanya.
Ukulungelelanisa kwakhona inqanaba lomntu kwiindawo ezingaphandleNokuba yeyoluntu okanye yeyabucala, ibe yeyona njongo iphambili yezicwangciso-buchule zasezidolophini ezijolise ekwenzeni izixeko zihlale, zigcinwe kwaye zibe yindawo ekhuselekileyo yabo bonke abantu
Kumaxesha akutshanje, ucwangciso lwedolophu luye lwasondela kwimodeli apho abemi bayo beziko lezenzo ezahlukeneyo ezenziweyo. Izakhiwo zasezidolophini zinento yokusebenza kunye neemvakalelo nefuthe ngokuthe ngqo kunxibelelwano nezithuba ezahlukeneyo kwaye apho ukukhanya kudlala khona indima ebalulekileyo.
Iindlela zokukhanya kwangaphandle
Ukukhanyisa yeyona nto iphambili kwezi ngcinga zintsha kubulela kumandla ayo njengendawo yokuguqula indawo. Izibane zangaphandle Idityaniswe nokusetyenziswa kokukhanya kokusebenza okujolise ekunikezeleni ukubonakala okuchanekileyo kwemisebenzi eyenziweyo kwiindawo ezivulekileyo, kunye nokukhanya kwezihombiso kugxilwe ekuphuculeni ii-facade ezenza le ndawo yedolophu.
Ukufezekisa ezi njongo, ukukhanya kweziyilo kufuneka zihambelane nemikhwa, indlela yokuziphatha kunye neendlela zokuphila zabasebenzisi, ngelixa kwangaxeshanye kufanelekile kwaye uhloniphe okusingqongileyo, usebenzisa izikhanyisi ezisebenza ngokukuko kwaye uphephe ungcoliseko lokukhanya ngolawulo olwaneleyo lwe-optical ethintela ukukhutshwa okuphezulu kunye nokukhanya okushiyekileyo.
Uyilo lokukhanyisa kukuziphatha okuqhubekayo okufuna ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi. Kule nkalo, kunomdla ukuphonononga ezona ntsingiselo ziphambili kwicandelo.
Ukubuyisa iindawo zabahlali basezidolophini
Izindululo ezintsha ziyacetyiswa ngenjongo yokuphucula indawo yokuhlala ezidolophini, ezinje ngokuhamba kweendlela kunye neendawo ezisembindini, ukusekwa kwemimandla yezithuthi ethintelweyo ukulungiselela abahambi ngeenyawo, okanye ukubuyiswa kwakhona kwemimandla esesidlangalaleni kunye nolungelelwaniso lwabasebenzisi.
Kule meko, ukukhanyisa kuba yinto ephambili enoku:
● Ukukhokela abemi kusetyenziso lwezithuba
● Ukuqinisekisa ngokhuseleko
● Ukuqhelanisa ukuhamba kwabasebenzisi ukwenzela ukuthanda ukuhlala kunye
● Ukomeleza uyilo loyilo lwesithuba
Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zokukhanyisa kweendawo zabahambi ngeenyawo, ezi zinto zilandelayo ziyimikhanyo yokukhanya efumanekayo: Ezikhutshiweyo, ezokuhlanjwa eludongeni, izibane, iibholiti okanye izibane zodonga eziphucula imeko yedolophu kwaye zongeze olunye uluhlu lolwazi kwindawo ngokukhanyisa.
Amakhaya eendawo ezisezidolophini
Imida yemveli phakathi kukarhulumente kunye necandelo labucala lifiphele. Ukuze kwenziwe ikhaya, isixeko kufuneka sibe likhaya labemi basoUkwenza izithuba ezibamemayo emva kokutshona kwelanga. Ukukhanyisa ke kuye kudla ngokuba luncedo ngakumbi kwaye kusondele kumsebenzisi ngokwenza imeko enobubele neyamkelekileyo kunye nezibane ezidibanisa kwisithuba.
Oku kukhokelela kukukhanya kokukhanya okufanelekileyo ngakumbi kwizikhanyiso ezinokusasazwa kokukhanya okuthile. Le meko ikhetha ukusetyenziswa kwezikhanyiso zangaphandle ezinamaqondo obushushu ashushu ngombala.
Ukuzinza sisiseko yoyilo lwesixeko esele sinyanisekile. Isixeko esikrelekrele siyakwazi ukwanelisa iimfuno zabemi baso kwezentlalo, kwendalo esingqongileyo, kunye nembono yokusebenza ngokudityaniswa kweTekhnoloji yoLwazi kunye noNxibelelwano. Ke ngoko, unxibelelwano lubalulekile kuphuhliso lolu hlobo lwendawo.
Ukukhanyisa yenye yezona zinto zibalulekileyo kuphuhliso lwezixeko ezifanelekileyo. Iinkqubo zokukhanyisa ezikrelekrele zenza ukuba ukusebenza, ukubeka iliso kunye nokulawulwa kwezibane zasedolophini kuthungelwano lonxibelelwano olungenazingcingo. Ngokusebenzisa itekhnoloji yolawulo olukude, kunokwenzeka ukulungelelanisa ukukhanya kwizidingo ezithile zesithuba ngasinye ngelixa ulungiselela iindleko kunye nokubonelela ngokuhambelana okukhulu kunye nokunxibelelana.
Ndiyabulela kule ndlela yokuqonda indawo, izixeko ziphinda zichaze ubuni bazo. Iyantlukwano yendawo, ehlengahlengiswe kwiimfuno zentlalo zabemi bayo, inegalelo kutshintsho lwenkcubeko kwaye ivuselela impilo yabemi.
Ke, ukulungelelaniswa kweenkqubo zokukhanyisa ngaphandle kwiindawo ezahlukeneyo ezenza isixeko yenye yeendlela ezibaluleke kakhulu kwicandelo. Impumelelo yoyilo lokukhanyisa olulungileyo luxhomekeke kwisakhono sayo sokusombulula iimfuno zomsebenzi, zeemvakalelo nezentlalo zabasebenzisi.